Ukusabalalisa kwe-Ultrasonic kwe-Charcoal esebenze kahle - I-Hielscher Ultrasound Technology
Amalahle asetshenzisiwe nama-carbons asebenzayo asetshenziselwa kakhulu ezithombeni, ezokudokotela nezimboni.
Ukuze uthole imiphumela engcono kakhulu, amalahle asebenzayo kufanele ahlakazeke ngokufanayo: Amancane amancane usayizi wezinhlayiyana, i-large particle surface, ngcono umsebenzi.
Ukusabalalisa kwe-ultrasonic kunikeza inhlayiya ephezulu nokusabalalisa kwe-homogeneous.
Izinsiza ze-Ultrasonic ze-Active Charcoal Dispersions
I-ultrasonic probe homogenizers yaziwa kakhulu njengethuluzi elinokwethenjelwa lokusabalalisa izinto zokwenziwa kwe-nano zibe ukumiswa. I-Sonication iphula izinhlayiyana zibe yi-sub-micron ne-nano usayizi futhi inikeza usayizi wokulinganisa usayizi wezinhlayiyana. Ukusabalalisa kubalulekile ekwenzeni impahla ngoba isimo sokuhlakazeka sinquma ukuthi izinhlayiya zizohlala noma zihlale zimisiwe.
Abahlakazeli be-ultrasonic abanamandla kakhulu bakaHielscher bayatholakala ezincane, emaphakathi nosayizi neziningi ezinkulu. Ukusabalalisa kwe-ultrasonic kungenziwa ku-batch noma ukuqhubeka kwe-flow-through mode.
Thintana nathi namhlanje, sizojabula ukukutusa imishini efanelekayo ye-ultrasonic yocwaningo lwakho noma ukukhiqizwa!
Amalahle asetshenzisiwe kanye namalahle omuthi yizinto eziphathekayo ezihlelekile, ezinobunyovu nesakhiwo esifana nesiponji. I-pores encane, ephansi-ivolumu yandisa indawo ekhona yokuthola izikhangiso noma izimo zamakhemikhali. Ngenxa yesakhiwo sesiponji, izinhlayiya zamalahle zikhangisa kakhulu futhi zingafaka izinto ezingafuneki (isib. Amafutha, ukungcola, i-talc, i-toxins) ngokuphumelelayo.
Umsebenzi wayo wokuhlunga uguqulela isikhunta esisebenzayo sibe yinto ehlanzekile kakhulu yokuhlanza esetshenziselwa i-pharma nemikhiqizo yezokwelapha, izimonyo, ukudla nezikhangiso zezimboni.
I-carbon esebenzayo ehlakazekile ihlinzeka ngamakhemikhali aphezulu futhi angasetshenziswa ngamanani amancane. Lokhu kusho ukuthi ukusabalalisa usayizi wezinhlayiyana ezincane kunganikeza izinzuzo ezibalulekile zokusebenza. I-Sonication iyindlela enhle yokusabalalisa ama-charcoal asebenzayo.
Njengoba amalahle asetshenzisiwe anikezela indawo enkulu, iyindawo ekhangayo kakhulu ye-adsorbent. Ukugqama ubukhulu bezinhlayiyana ze-carbon / charcoal esebenzayo, indawo ephakeme kakhulu futhi ngaleyo ndlela isheshayo se-adsorption kinetics yayo.
Iyini i-Activated Carbon Esetshenziselwa?
Ubukhulu obuhle besitshalo esikhuthele sisetshenziswa kabanzi ezindaweni zokusebenza ezihlukahlukene kanye nezimboni. Imiphumela ye-Ultrasonic ehlakazeka endaweni ephakeme ukuze ivolumu isilinganiso sezinhlayiya, okubenza kube nokusebenza okuphezulu kakhulu (isib. Adsorbent, catalytic).
Phama, Ukudla & I-Cosmetic Additive
Amalahle asetshenzisiwe asetshenziswe kakhulu njengesithako semikhiqizo eminingi e-pharma, ukudla & isiphuzo, izimonyo kanye nemikhiqizo yamakhemikhali, lapho i-carbon esebenzayo isebenza njenge-decontaminant, i-adsorbant nokuhlanza.
I-carbon esebenzayo isetshenziswa kakhulu ngesikhathi sokuqedwa kwensimbi yokuhlanzwa kwezixazululo ze-electroplating (isib. Ukususwa kokungcola okungokwemvelo).
I-carbon esebenzayo isetshenziselwa ukususa izinto eziningi ezingadingeki ezivela kumkhiqizo. Isibonelo, ama-carbons asetshenziselwa ukususa ukungcola, imibala engadingeki, ukungcola okungokwemvelo, abaphakathi. Isetshenziswa ngesikhathi sokuhlanza ekukhiqizeni imithi, ukudla & iziphuzo, iwayini & utshwala, amakhemikhali & amakhemikhali okhethekile, kanye nezinye izimboni.
Izingxube ze-carbon ezisetshenziselwa ukusetshenziselwa isigaba sokumisa ekuhlukanisweni kwe-chromatographic ephansi ye-carbohydrate (i-mono-, di-, ne-trisaccharides) ezinkambisweni zokuhlaziya noma zokulungiselela (isisombululo se-ethanol njengesigaba seselula).
Amalahle asebenzayo asetshenziswa njenge-pesticide, enezela kokudla kwezilwane kanye ne-agent yokucubungula.